(၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး | အမျိုးသားလွှတ်တော်
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ကရုပ္ပိကျေးရွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဆောက်လုပ် နေသည့် မြေနေရာသည် ဆားငန်မြေပေါက်ပြီး ပင်လယ်ရေ ဝင်ရောက်သော မြေနေရာဖြစ်သဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ကျေးရွာအထောက်အကူပြု ကော်မတီတို့မှ ရွေးချယ်ထားသော မြေနေရာတွင် ပြောင်းရွှေ့ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
လောင်းလုံမြို့ပေါ်တွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၅၀)ကျော်က ဆောက်လုပ် ထားသည့် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ပြီး အန္တရာယ်ရှိ ဆေးရုံဟောင်းအား ဖျက်သိမ်း၍ နှစ်ထပ် သို့မဟုတ် သုံးထပ် စုပေါင်းရုံး အဆောက်အအုံ တစ်လုံး တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့ကို ပင်လုံမြို့နယ် အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်း
မာန်အောင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံး မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်လျက် လျှပ်စစ်မီး(၂၄)နာရီ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အောင်လှပြင်နှင့်ကုန်းခင်ကြားရှိ ကင်းမြစ်ကိုဖြတ်၍ တံတားထိုးပြီး မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်လျက် လျှပ်စစ်မီးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပခုက္ကူမြို့ပေါ်(၁၅)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြည့်ဝစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာများ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ပေးရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲရုံများကို ဝန်အားမြှင့်တင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(၆၈) ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၁၃.၇.၂၀၁၅)
၆၈ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၁၃. ၇. ၂၀၁၅)
နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင်အခွန်ပေးဆောင်၍ တင်သွင်းလာခဲ့သော မော်တော်ယာဉ်များသည် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိပြီး ပိုင်ရှင်မှ ထုတ်ယူသောအခါ မူလကပါဝင်ခဲ့သော ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများ ခိုးယူ ခံနေရခြင်းသည် မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိလိုကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ် ကားပစ္စည်း အခွန်လွတ်စျေး၌ ရောင်းချနေသော မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ၏ ၉၀%သည် နယ်စပ်မှ မှောင်ခိုတင်သွင်းလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဆိပ်ကမ်းမှ ခိုးယူလာသော ပစ္စည်းများ ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပြီး ထိုကဲ့သို့ ခိုးယူမှုပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက် မည့်အစီအစဉ်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများရှိ ဆရာ/ဆရာမများအား ထောက်ပံ့ကြေးငွေ တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပလက်ဝမြို့နယ်၊သံထောင်ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ကို ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက် ရန်ပုံငွေတွင် ထည့်သွင်း၍ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း